कुशल सामग्री उत्पादनको लागि 10 आवश्यक तत्वहरू Martech Zone
Wrike तपाइँको संगठन भित्र सामग्री उत्पादन स्ट्रिमलाइन गर्न को लागी एक सहयोग प्लेटफर्म हो। तिनीहरूले यसलाई सामग्री इन्जिनको रूपमा सन्दर्भ गर्छन् र दश तत्वहरू वर्णन गर्दछन् - दुबै संगठनबाट र प्लेटफर्मबाट - जसले सामग्री उत्पादनलाई बढी कुशल बनाउँदछ।
सामग्री ईन्जिन के हो?
सामग्री ईन्जिन भनेको मानिस, प्रक्रिया र उपकरणहरू हुन् जसले बगैंचा सामग्री, वेबिनार, ईबुक, इन्फोग्राफिक्स, भिडियो र स्लाइडसेट सहित मिडिया प्रकारहरूमा उच्च गुणवत्ता, लक्षित र लगातार सामग्री वितरण गर्दछ।
कार्यकारी खरीद - किनभने अनुसन्धान, विकास, डिजाइन र सामग्री मार्केटि program कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि संसाधनहरू आवश्यक पर्दछ, तपाईंसँग तपाईंको कार्यकारीहरूबाट दीर्घकालीन खरीद हुनुपर्छ।
रणनीतिक संदर्भ - एक कार्यक्रम हो कि भूमिका, पीडा पोइन्ट्स, छेदन, र लक्षित दर्शकहरु को इच्छाहरु को निवेश को रूप मा समाहित गर्दछ।
सामग्री हब - केन्द्रीय स्रोतहरू जहाँ तपाईंको दर्शकहरूले प्रकाशित सामग्री फेला पार्न सक्दछन् र जहाँ यसलाई प्रचार गर्न सकिन्छ।
सामग्री सिर्जनाकर्ताहरू - व्यक्तिहरूको टोली जसले सामग्री लेख्न, सम्पादन गर्न, दृश्य र व्यवस्थापन गर्न सक्दछ।
डिजाइनर र सामग्री प्राविधिक - ग्राफिक डिजाइनरहरू, भिडियो सम्पादकहरू, इन्फोग्राफिक र ईबुक विशेषज्ञहरू जसले सामग्री लिन्छन् र यसलाई कलामा बदल्छन्।
सामाजिक मिडिया, विज्ञापन, एसईओ र मार्केटिंग प्रमाणीकरण सहयोग - उत्कृष्ट सामग्री बनाउनु पर्याप्त छैन, तपाईंसँग यसको प्रमोट गर्न एक टीम र स्ट्रेट्रेजी छ।
कार्यप्रवाह, सम्पत्ति व्यवस्थापन र सहयोग उपकरण - सामग्री उत्पादन उपकरण जस्तो Wrike जहाँ तपाईं केन्द्रबाट काम गर्न सक्नुहुन्छ, कार्य, समयरेखा, र अनुमोदनहरू काम गर्दै।
सम्पादकीय क्यालेन्डर - तपाईंको सामग्री योजनाको लागि छोटो र दीर्घ-समय सामग्री प्रदर्शन गर्न र प्रदर्शन गर्ने क्षमता।
आवाज र ब्रान्ड दिशानिर्देशहरू - ब्रान्डि and र मेसेजिंग गाईडहरू तपाईंको सिर्जनाकर्ताहरू र विज्ञहरूको लागि उपलब्ध तपाईंको सामग्रीको उत्पादन भर स्थिरता सुनिश्चित गर्न।
विश्लेषण - सामग्रीको प्रत्येक टुक्रा, प्रत्येक अभियान, प्रत्येक टीम, र समग्र योजनाको लागि प्रदर्शन ट्र्याक गर्न एक प्लेटफर्म।
यो Wrike प्लेटफर्मले सेल्सफोर्स, Zapier, Okta, Bitium, Google Apps, Gmail, Apple मेल, आउटलुक संग एकीकृत गर्दछ र यसको आफ्नै Android र iOS मोबाइल अनुप्रयोगहरू छन्।
हामी यस पोष्टमा हाम्रो सम्बद्ध लिंक प्रयोग गर्दैछौं, साइन अप गरेर निश्चित गर्नुहोस् Wrike एक परीक्षण ड्राइव को लागी!
टैग: android एपस्याउ मेलबिटियमसामग्री क्यालेन्डरसामग्री ईन्जिनसामग्री उत्पादनजीमेलगुगल एप्सios अनुप्रयोगOktaदृष्टिकोणबिक्री बलWrikezapier
प्रोग्रामेटिक प्रत्यक्ष प्रदर्शन विज्ञापन के हो?
सहित इन्स्टाग्राम फोटो वृद्धि ईमेल सगाई 7x